Misy Anglisy hafa iray hafa
Aostralia & Nouvelle Zélande Aostralia
Tsia, tsy ny faritra Twilight - Aostralia ity
Rehefa mieritreritra ny "New England ianao" dia mieritreritra an'i Boston, Hartford ary Providence ianao. Mieritreritra ny mpilatsaka an-kibon-dranomandry ianao, ny loko marevaka, ny loharano miboiboika ary ny lohataona. Heverinao ny momba an'i Paul Revere, lob-stah sy Family Guy. Eritreretinao ny tsato-kazo, ny fiangonana ary ny Patriotsa Vaovao any Angletera.
Mety tsy hieritreritra momba ny kangaroo ianao - fa raha ny "New England" manokana, dia tokony ho izany ianao.
(Eny, izany dia fanitsiana lehibe momba ny toerana misy an'i Angletera Vaovao.)
Aiza ny New England, Aostralia?
Tokotokony ho 10.000 kilaometatra avy eo amin'ireo arabe marobe ao Boston no ahitanao ny "New" Anglisy hafa iray, izay any amin'ny faritra avaratry ny fanjakana New South Wales any Aostralia, izay misy koa ao Sydney. Antsoina hoe "Tablelands Avaratra" sy / na ny "Tendrontany Avaratra Andrefana", New England, any Aostralia, mipetraka manodidina ny 35 kilometatra miala amin'ny ranomasimbe.
Mahaliana fa raha mbola tsy voafaritra amin'ny fomba ofisialy amin'ny fomba ofisialy i New England (amin'ny endriny ara-jeografika), dia nanenjika ny fanjakana aostraliana ofisialy nandritra ny fotoana ela izy, nikasa ny hisaraka amin'ny New South Wales manodidina. Raha mahomby ny hetsika, dia mbola hisy zavatra hafa momba ny faritra izay manasaraka azy amin'ny zanak'olo-mpiray tam-po aminy any Amerika Avaratra, na dia mbola tsy mazavazava kokoa aza ny mamaritra amin'ny fomba hafa - ankoatra izany ao anatin'ny fotoana fohy.
Inona ny Tantaran'i Angletera Vaovao?
Ny tantaran'i New England, Aostralia dia tsy dia mahagaga loatra raha vao niverina tamin'ny mpikaroka Anglisy sasany, na dia tonga teo aza ireo taona vitsivitsy taorian'ny nahatongavan'ny razambeny tany Plymouth Rock. Amin'ny ankapobeny, tamin'ny tapaky ny taonjato faha-19 dia nanomboka nitodika ny faritra izay hantsoina hoe "New England" ny tantsambo anglisy toa an'i John Oxley sy Allan Cunningham.
Tany am-boalohany, New England dia mbola nanampy kely kokoa ny orinasa mpamokatra hazo, noho ny tahiriny lehibe avy amin'ireo hazo sedera mena Aostraliana. Na izany aza, ny indostria tao amin'ny faritra dia nanitatra ny volamena sy ny fitrandrahana varahina, ary tamin'ny fahatongavan'ireo lalamby tamin'ny faramparan'ny taonjato faha-19 dia niorina tamina tanàn-dehibe toy ny Tamworth sy Armidale ny mponina hatrizay, izay mirakitra ny serivisy tsy tapaka sy ny fifandraisana fiarabe maro. Ny serivisy fiarakodia eto, toy ny tranga tany Australia maro androany, dia mamela be dia be.
Misy Zavatra Hafa any Angletera Vaovao ve any Aostralia?
Na dia tsy azo lazaina aza fa ireo tendrombohitra maitso mandroso sy ireo sisan-dranomam-bato ao New England, Aostralia dia miavaka ho an'ny tenany manokana ary manantena ny hitsidika azy, tahaka ny mahaliana ny faritra ho an'ny mponina eo an-toerana sy ho an'ireo mpandeha izay mitranga ho any amin'ny faritra, ohatra any amin'ireo torapasika malaza manerantany any Coffs Harbor na Byron Bay.
Ohatra, ny New England any Aostralia dia trano 30 eo ho eo eo amin'ny zaridainam-pirenena, anisan'izany ny National Park Park National Park, Guy Fawkes River National Park, ary angamba tsy dia mahagaga loatra, ny New England National Park. Azonao atao ny mamantatra mora foana ny zavamiaina Aostraliana (na kangaroos) manerana ny faritra, mba tsy hilazalaza momba ny zavamaniry sy be dia be.
Tsy handeha amin'ny làlan'ny cosmopolitan any amin'ireo tanàn-dehibe tahaka ny any Boston ianao, ary tsy afaka ny hankafy ilay alika mahavariana azonao any amoron-dranon'i Maine (farafaharatsiny raha tsy mandoa ny vidiny be dia be) Azonao atao ny milaza ny zavatra manan-danja indrindra izay tokony holazaina rehefa tonga any an-toeran-kafa: misy eto! Any New England, Aostralia.
Toerana Afo Afoina Hijanona sy Hanadihady any Hobart
Mianara Fahaizana Vaovao ao amin'ny Centre Goodlife Londres
17 Sarina mavo mendrika hanaovana mozika hitsidika any Aostralia
Fetin'ny Adelaide Festival 2016 - Adalaide Gay Pride 2016
PNC Park: Torolalana ho an'ny Piramidan'i Pittsburgh
PGA Golf Club, St. Lucie Manolotra Taratasy Lehibe ho an'ny Golf, Lodging
Fanatanjahan-tena sy fanatanjahan-tena - Famerenana, torohevitra ary fividianana
Inona ny Haka?
Ny Duo ao Makan no mampiseho anay ny toeram-pisakafoany any Atlanta
10 Facts About Sending Gifts in UK
Hong Kong roa andro fitsidihana
Waikiki Rigger avy ao amin'ny Waikiki Beach
Gillette Castle: Hanararaotra anao ity zava-mahadomelina ity ao Connecticut
Top Events, Festivals and Concerts in the Bahamas
5 Montana RV Parks mila mitsidika
Ny Kitapo fofona maimbo indrindra ao Chicago
Taom-baovao Kambojiana tany Long Beach